Arduino Yun, အရာများ၏အင်တာနက်ကိုလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်ရန်ဘုတ်အဖွဲ့ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Internet of Things သို့မဟုတ် IoT ဟုလည်းလူသိများသောနည်းပညာသည်ကမ္ဘာကြီးကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းများ (ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်ဖြစ်စေမလိုသည်ဖြစ်စေ) သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပရိုဂရမ်များကိုလုပ်ဆောင်သော၊ စျေးသိပ်မကြီးသော၊ ကြိုးမဲ့သော့သို့မဟုတ်ကွန်ယက်ကဒ်မသုံးဘဲအင်တာနက်နှင့်လည်းချိတ်ဆက်နေသောဘုတ်ကိုရှာဖွေနေကြသည်။ များစွာသောသူတို့အတွက်အဆုံးစွန်သည်အလျင်အမြန်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သောသို့မဟုတ်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ဒီပေးထားသော၏အဖွဲ့ Arduino စီမံကိန်းသည်အင်တာနက်၏အရာများအတွက်ရည်ရွယ်သောဘုတ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီဘုတ်ကို Arduino Yun လို့ခေါ်တယ်.
1 Arduino Yun ဆိုတာဘာလဲ။
2 Arduino Yun နဲ့ဘာကွာခြားမှုလဲ Arduino UNO?
3 Openwrt-Yun ဆိုတာဘာလဲ။
4 Arduino Yún configuration ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
5 Arduino Yúnနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲ?
Arduino Yun ဆိုတာဘာလဲ။
Arduino Yun သည် Arduino စီမံကိန်းမှဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမဆိုရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြားများကိုဖန်တီးရန်၎င်းဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ Arduino Yúnကိစ္စတွင် Arduino Leonardo ကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ Arduino UNO.
Arduino Yun သည်တူညီသောဒီဇိုင်းနှင့်ရှိသည် Arduino Leonardo နှင့်အတူတူပင် Controller, ပရိုဆက်ဆာကိုဆိုလိုသည် Atmel ATmega32U4။ ဒါပေမယ့် Arduino Leonardo နဲ့မတူဘဲ Arduino Yúnတွင် Atheros ကြိုးမဲ့ AR9331 အသေးစားဘုတ်၊ microsd ကဒ်ပြားများနှင့် Linino ဟုခေါ်သောအမာခံတစ်ခုရှိသည်။.
Arduino Yun နဲ့ဘာကွာခြားမှုလဲ Arduino UNO?
အထက်ပါအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ Arduino Yúnမော်ဒယ်နှင့်မော်ဒယ်အကြားခြားနားချက်များမှာရှင်းနေပါသည် Arduino UNO။ သို့သော်ထိုထက်မကသောအရာများရှိသည်။
သင်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေခဲ့သောဆောင်းပါးကိုသင်ကြည့်ပါက Arduino ဘုတ်အဖွဲ့တွင် Raspberry Pi ကဲ့သို့အခြားဘုတ်အဖွဲ့များ၌များစွာသောဒြပ်စင်များမရှိသော်လည်း Arduino Yúnမှာမူမတွေ့ပါ။
Lininus ဟုခေါ်သောအရာသည်စွမ်းအားအလုံအလောက်ပေးနိုင်သောအဓိကအချက်ဖြစ်သည် Openwrt-Yun ဟုခေါ်သောဖြန့်ဝေမှုသေးသေးလေးတစ်ခုရှိသည်။ ဒီဖြန့်ဖြူးမှုမှာ Linux kernel ကိုသုံးပြီး Openwrt ကို atheros board နှင့်တူသောမည်သည့်စက်ကိုမဆို install လုပ်နိုင်သောအခြားကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။
OpenWRT ၎င်းသည်မည်သည့် router နှင့် wireless card သို့လိုက်ဖက်သော Gnu / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာ, Openwrt-Yun သည် Arduino Yun တွင်တပ်ဆင်ရန်ပြုပြင်ထားသောဖြန့်ဖြူးသည်။ microsd ကဒ်များအတွက် slot မှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် Linino တွင်တည်ရှိပြီးဖြန့်ဖြူးနိုင်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် ssh မှတစ်ဆင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအဝေးမှချိတ်ဆက်ပြီးဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ package manager နှင့်ကျန်ကိရိယာများကိုသာသုံးရမည်။
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ဒီဖြန့်ဖြူး ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Operating system ရှိသော်လည်းအခြေခံအားဖြင့် Raspberry Pi board နှင့်မတူပါ ၎င်းကို minicomputer တစ်ခုသို့မဟုတ် server အနေနှင့်သို့မဟုတ် cluster ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Arduino Yún configuration ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
Arduino IDE ပါသော pc ကအသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် drivers ကို install လုပ်ပါ
ဆက်သွယ်မှုများအတွက် remote interface နှင့်ကြိုးမဲ့ interface ကိုအသုံးပြုရန်ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်များအတွက်“ bridge” အဆင့်ကိုပြုပြင်ပါ။
ပထမအဆင့်သည်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာတစ်ချိန်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Arduino Yun ဘုတ်သို့ပရိုဂရမ်များနှင့်အချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအတွက်ငါတို့သာလုပ်ရမယ် ဘုတ်ဒရိုင်ဘာကို install လုပ်ပြီး Arduino IDE ကို run ပါ။ အကယ်၍ Gdu / Linux တွင် Arduino IDE ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်မှာဘာမှပြbeနာမရှိတော့ပါဘူး။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Windows ရှိပါကဤမော်ဒယ်အတွက်ဒရိုင်ဘာများနှင့်အခြား Arduino မော်ဒယ်များကို Arduino IDE ဖြင့်ထည့်သွင်းထားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤ IDE ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ Mac OS ရှိရင် Arduino IDE ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Arduino Yún board ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ချိတ်ဆက်သောအခါ keyboard installation wizard ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ရလိမ့်မည်။ အနီရောင်ခလုတ်ကိုအတူ။ ၎င်းသည်ထင်ဟပ်သောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည် Arduino Yun ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်.
ကျွန်ုပ်တို့သိရန်စိတ်ဝင်စားသောနောက်တစ်ခုမှာ Arduino Yún Wi-Fi module ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာကျနော်တို့ပန်းကန်မှစွမ်းအင်ပေးရမယ်, ၎င်းသည်ဘုတ်အဖွဲ့မှ Yun ဟုခေါ်သောဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖန်တီးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုချိတ်ဆက်သည် browser: //arduino.local လိပ်စာကိုရေးသည် ဤလိပ်စာသည်ကွန်ယက်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံနိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖွင့်လိမ့်မည်။ ဤအဖွဲ့၏သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်မှာ "arduino" ဖြစ်သည်panel ထဲကို ၀ င်လိုက်တာနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Arduino Yun ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးဖို့မဟုတ်ဘဲ Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ဖွင့်ထားတဲ့ panel ထဲမှာအောက်ခြေမှာမည်သည့် Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုမဆိုချိတ်ဆက်ရန် element များနှင့်တက္ကသိုလ်ကွန်ယက်များနှင့် protocols များနှင့် password software သုံးသောအခြားအလားတူကွန်ရက်များ မှလွဲ၍ drop-down တစ်ခုရှိသည်။ မဖြစ်နိုင် (နေဆဲ) ပြား၏ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူဆက်သွယ်မှုပါစေ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်၊ အခြားဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုသို့မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားဘုတ်အဖွဲ့များနှင့် / သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်များနှင့်ဤဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့သုံးရမည်နည်း။
ကောင်းပြီ Arduino IDE မှာဖန်တီးထားတဲ့ပရိုဂရမ်ထဲမှာ Bridge function ကိုသုံးရမယ်။ ဒီ function ကစတယ် Bridge.begin ()Arduino Yúnဘုတ်၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကြိုးမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆက်သွယ်နိုင်မည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု။
လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များနှင့်အတူ Arduino Yúnဘုတ်၏ကျေးဇူးကြောင့်မည်သည့်နည်းပညာပစ္စည်းကိုမဆို "အသိဉာဏ်" ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် အသုံးအများဆုံးမှာ gadget ကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်ဘုတ်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည် ၎င်းကိုစမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာစသောအခြားကိရိယာများမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
သုံးစွဲသူအချို့သည် board ကိုရှားပါးသော network card တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြသော်လည်းထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မှာအလွန်ခက်ခဲပြီးပုံမှန်ကွန်ယက်ကဒ်များထက်ဘုတ်၏စျေးနှုန်းမှာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောရန်လိုအပ်သည်။ On ညွှန်ကြားချက် မင်းရနိုင်တယ် Arduino Yúnနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာ၏သေးငယ်သောပန်ကာတစ်ခု။ ဘုတ်အဖွဲ့၏အမည်ကို repository search engine တွင်ရေးရန်နှင့်ဤပုံစံကိုသုံးသောစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးပေါ်လာလိမ့်မည်။
Arduino Yúnသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအရေးကြီးသောဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်အထိသူ့စီမံကိန်းကိုအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ချင်သူမည်သူမဆို Arduino ဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုခွင့်ပြုသည့်ကြိုးမဲ့သို့မဟုတ်ဂျီအက်စ်အမ်အကောင့်ကိုဝယ်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုန်ကျစရိတ် Arduino Yun ထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့်ပိုမိုကန့်သတ်နှင့်အတူပိုမိုခက်ခဲပရိုဂရမ်သည်။ Arduino Yun သည်ဤအရာအားလုံးကိုပြုပြင်ပြီးယခုအချိန်အထိပိုမိုပေါ့ပါး။ ပိုမိုအစွမ်းထက်သော gadget များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းသည် Raspberry Pi Zero W. ကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများနှင့် ပို၍ သင့်တော်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Arduino နှင့် Raspberry Pi နှစ်မျိုးလုံးသည် Free Hardware လမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းအားမထိခိုက်စေဘဲဘုတ်နှင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » အရာဝတ္ထုများ၏အင်တာနက်ကိုလွတ်လပ်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ဘုတ်အဖွဲ့ Arduino Yun
မင်္ဂလာပါ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 24ပြီ ၂၄ ရက်၊ ဒီပန်းကန်ကိုထုတ်လုပ်သူမှရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာလို့ပါ။
ငါ link ကိုထားခဲ့ပါ https://store.arduino.cc/arduino-yun